Saron-tavy arovana amin'ny varotra
Ny saron-tavy fiarovana dia saron-tava fiarovana isan'andro sy sarontava fiarovana
Masindahy miaro tena isan'andro
Ny vatan'ny saron-tava ho an'ny sarimihetsika fiarovana isan'andro dia vita amin'ny sivana. Ny saron-tava fiarovana isan'andro dia mizara ho mason-tavy vovoka sy saron-koditra manohitra ny tsimokaretina.
Miaro amin'ny vovoka manimba voly ny mason-tavy. Ny saron-tava misy porofo amin'ny ankapobeny dia voasarimakirana ka mety hifanentana amin'ny vava sy ny orony mba hahatratrarana ny vokatry ny fisorohana vovoka. Matetika ny vovoka masaka no ampiasaina manakana vovoka sy entona mandrehitra, fa tsy afaka manivotra mikraoba.
Ny masika manohitra ny tsimokaretina dia fitaovana miaro amin'ny taovam-pisefoana ampiasaina hiarovana ny taovam-pisefoana amin'ny otrikaretina miady amin'ny poizina sy vovoka amin'ny radioaktifa.
Masindahy fiarovana fiarovana
Ny tarehy amin'ny mason-koditra fiarovana ara-pitsaboana dia mizara ho sosona anatiny, afovoany sy ivelany. Ny sosona anatiny dia lamba fanadiovana mahazatra sy lamba vita amin'ny lamba. Ny takelaka ivelany dia lamba tsy vita ary ny lamba manify polypropylene ultra-manify.
Tena hydrophobic sy fofonaina.Izany dia misy fiantraikany lehibe amin'ny otrikaretina bitika ary vovoka manimba. Ny vokatry ny fanivanana amin'ny ankapobeny dia tsara, ary ireo fitaovana ampiasaina dia tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza. Mahazo aina izy ity.
Izy io dia afaka misoroka ny areti-mifindra ateraky ny habakabaka amin'ny alàlan'ny rivotra ≤ 5μmg amin'ny areti-mifindra ary ny fifandraisan'ny elanelana akaiky amin'ny aretina miteraka. Ny fahombiazan'ny fanivanana ny singa amin'ny mason-tava dia tsy latsaky ny 95%, ary ny haavon'ny fiarovana dia avo.
Ny masika fiarovana fiarovana dia ampiasaina amin'ny fiarovana ny vatan'olombelona amin'ny singa voaaro ao amin'ny rivotra, ny fiarovana ny mpiasan'ny mpitsabo amin'ny faritra voan'ny areti-mifindra, ny fiarovana ny mpiasan'ny laboratoara virus, ny fiarovana ny karazan'olona maro mandritra ny areti-mifindra amin'ny areti-mifindra, poizina simika, mpiasa mpitrandraka, mpiasan'ny vovobony, sns.